A kwụsịtụrụ ọgwụ mgbochi Hong Kong COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong » A kwụsịtụrụ ọgwụ mgbochi Hong Kong COVID-19
Akụkọ Ahụike • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ mgbasa ozi Macau • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
N'ihi nkwakọ ngwaahịa na-enweghị ntụpọ, onye nrụpụta German Pfizer-BioNTech agwala ndị Hong Kong na Macau akwụkwọ taa banyere mkpuchi na ọgwụ mgbochi otu 210102 Cominarty.
Gọọmentị Hong Kong na-emehie n'akụkụ ịdọ aka ná ntị ma na-akwụsịkwa usoro nke abụọ - nọmba 210104.
Dabere na prọfesọ Hong Kong, ọ nweghị ihe akaebe na okwu nsogbu na-ebute ihe egwu nchekwa.
Macau na-agbaso usoro mana ọ ka na-akwụsịtụ aha izizi aha ya.
Maka ọdịmma nke ọha na eze, kwụsịtụrụ ọgwụ mgbochi Hong Kong COVID-19 ka a na-enyocha okwu gbasara ngwugwu na-ezighi ezi nke ụdị ọgwụ mgbochi 2. A ghaghị ịchekwa ọgwụ mgbochi bioNTech na -70 Celsius Celsius, na nsụgharị ndị China si Sinovac bụ naanị ọgwụ mgbochi 2 dị ugbu a na Hong Kong.
N'ihe dị ka elekere asatọ nke mgbede na Tuesday, Hong Kong ọnụ ọgụgụ gọọmentị gosipụtara ngụkọta nke ndị 403,000, ma ọ bụ ihe dị ka pasent 5.3 nke ndị bi n'obodo ahụ, ka ọgwụ mgbochi. N'ime ndị ahụ, 150,200 anarala ọgwụ izizi nke ọgwụ mgbochi bioNTech, ma e jiri ya tụnyere 252,880 maka nke Sinovac.
Ngalaba Ahụike ga-enwe nzukọ mberede na ihe mere na Fosun Pharma, nke na-ebugharị jab nke BioNTech na nnukwu ọgwụ Pfizer US.
Ihe dị ka awa abụọ tupu gọọmentị Hong Kong kwuru, Macau kwenyesiri ike na ndị bi na ya agaghị anata ọgwụ mgbochi site na 210102 ogbe. Nkwupụta sitere n'aka gọọmentị Macau kwuru n'agbanyeghị na ọgwụ mgbochi a na-ekwu maka ya anaghị eweta ihe egwu ọ bụla, BioNTech na Fosun rịọrọ ka a kwụsịtụrụ ya ruo mgbe ha mechara nyocha ha.
Mahadum nke Hong Kong ọkà mmụta banyere microbiologist Ho Pak-leung kwuru na obodo ahụ ga-eme otu ụzọ mgbochi dị ka Macau, mana prọfesọ ahụ kwusiri ike na ruo ugbu a enweghị ihe akaebe nke ihe egwu nchekwa ọ bụla na-esite n'okwu nkwakọ ngwaahịa.
Foto ndị e tinyere na soshal midia gosipụtara ihe ịrịba ama na mpụga ụlọ ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi Hong Kong na-ekwu na a na-atụ anya gọọmentị ime ọkwa pụrụ iche ma emesịa na Wednesde metụtara ọrụ ya.
Ọgwụ mgbochi covid-19 Hong Kong Macau